Raad Raac News Online – Golaha Wasiirada Xukumada oo Go’aan ka soo saaray Lacago faro badan oo la sheegay in lagu qaado Dekeda Muqdisho.
Golaha Wasiirada Xukumada oo Go’aan ka soo saaray Lacago faro badan oo la sheegay in lagu qaado Dekeda Muqdisho.
Iyadoo shalay Golahada Wasiirada Xukumada Soomaaliya kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen lagu ansixiyay miisaaniyada xukuumada sanadka 2013-ka, ayaa dhinaca kale waxaa lagu soo qaaday arrimo ku saabsan habka lacagaha looga qaado Dekeda Muqdisho.
Kulankaasi shalay ayaa Waxaa Golaha wasiirrada ee Xukuamada ay si weyn uga doodeen islamarkaana u sheegeen in wax la aqbali karo aysan aheyn, wixii hadda ka danbeeya lacagaha is barbar socda ee laga qaadayo gadiidleyda dekeda ka shaqeysa iyo waliba xamuulka ka soo dega, waxaana Goluhu ay war cad ka soo saareen Arrintaasi iyaga oo isku raacay in aan la ogoleyn lacag aan aheyn tan ay qaado Dowladda hoose ee canshuurta ah.
Si kastaba Go’aanka ku aadan Lacagaha Faraha badan ee Dekeda laga qaado ee ay qaateen Golaha wasiirrada xukuumada Soomaaliya ayaa waxaa siweyn u soo dhaweyay gadiidleyda iyo ganacsatada Muqdisho ee ku xiran Dekeda, waxaana meesha uu ka saarayaa musuq maasuq weyn oo ka jiray Dekeda kaasi oo dhibaato xoog leh ku qabeen Ganacsada iyo qeybada Bulshada.